Chelsea oo dagaal adag kala kulmeysa koox England kala dhisan oo dooneysa Ben Chilwell – Gool FM
Chelsea oo dagaal adag kala kulmeysa koox England kala dhisan oo dooneysa Ben Chilwell
Haaruun June 8, 2020
(London) 08 Juun 2020. Tababaraha kooxda Chelsea ee Frank Lampard ayaa doonaya inuu suuqa xagaagan la soo saxiixdo xiddiga difaaca kaga ciyaara kooxda Leicester City ee Ben Chilwell.
Balse majaladda The Guardian ayaa warineysa in kooxda Manchester City ay diyaar u tahay inay ku dagaallanto saxiixa difaaca Leicester marka uu suuqa kala iibsiga xagaaga furmo.
Macallinka Man City ee Pep Guardiola ayaa inta badan isticmaala Benjamin Mendy, halka marmarka qaar uu ku buuxiyo booska difaaca bidix xiddiga dhallinta yar ee Oleksandr Zinchenko, waxaana macallinka Isbaanishka ah uu doonayaa inuu iska xoojiyo booska dadabka bidix ee difaaca.
Si kastaba ha ahaatee, kooxda lagu naaneyso Foxes ayaa lagu soo warramayaa inay Chilwell ku qiimeyneyso lacag ka badan qiimihii ay ku iibiyiin Harry Maguire oo xagaagii hore Manchester United ugu biiray 80 milyan oo Gini.
Leicester ayaa xiddiga ka soo qalin jabiyay kulyaddeeda ku qiimeyneysa 85 milyan oo Gini, inkastoo wararka ay sheegayaan inuu qiimahaas ka hoos mari doono maadaama musiibadii coronavirus ay hoos u dhigtay dhammaan qiimihii xiddigaha kubadda cagta.
Majaladda The Mirror ayaa toddobaadkii tagay warisay in 23-jirka xulka qaranka England uusan wali kooxdiisa kala hadlin mustaqbalkiisa iyo inuu doonayo ka tagista King Power Stadium, xilli kooxda Macallin Brendan Rodgers u dagaallamayso ka qayb galka tartanka Champions League xilli ciyaareedka dambe.
Haddii ay Leicester City ku dhammeysato boosaska ugu horreeya ee kala sarraynta horyaalka, waxay fursad wanaagsan u heli doonaan si heysashada Chilwell.
Neymar Jr oo Saaxiibadiisa kooxda Paris Saint-Germain u sheegay in…….
Arsenal oo dhabar jab kala kulantay xiddig ay doonayeen inay ku badalaan Aubameyang